China Kuqondile Raidial Bidirection extruder ipayipi umshini ifektri kanye nabaphakeli | I-BAOTE
IRainbow Tech ithuthukise Uchungechunge lwemishini yamapayipi wekhonkrithi ye-Bidirectional inabakhiqizi engqondweni. Idizayini yezinto ezisebenziseka kalula ivumela ukufinyeleleka okulula kwensizakalo, ukugcinwa kwezinto ezijwayelekile kanye nokushintshwa okusheshayo kokunamathiselwe. Isikhathi sokuhlanza sinciphile ngoba kuncane ukuchitheka kwempahla. Igobolondo lesisekelo somgodi wensimbi linciphisa isikhathi sokufaka ukuze umshini ungene ngokushesha ekukhiqizeni.
Ngenhla imishini yamapayipi e-RCC esetshenziselwa ukukhiqizwa kwepayipi le-Drainage nokukhiqizwa kukakhonkolo owomile.
Imishini yomshini wepayipi kakhonkolo we-Precast ingaveza ipayipi likakhonkolo eliqinisiwe, eliqiniswe ngokhonkolo,
amapayipi endle kakhonkolo, ukuhlolwa kwe-precast kahle, ama-manholes njll, asetshenziswa kakhulu kuphrojekthi yengqalasizinda engaphansi komhlaba
Yethula inkampani yethu ingaveza zonke izinhlobo zamalunga wepayipi isikhunta,
njenge-Flush Joint (I-Butt Joint), i-Rubber Ring Joint, ijoyini elihlanganayo, isokhethi eboshiwe, ukuhlangana okuphakathi kodonga, amapayipi okuPhusha, ipayipi leJacking njll uma kunezidingo ezikhethekile, futhi sinamandla okwenza okufanelekile
ukhonkolo ipayipi umshini ikhasimende lethu.
I-Vertical Radial Extruder RCC imishini yamapayipi ihlanganisa ubuchwepheshe bokwenza amapayipi obuthuthukile ne-Bidirectional Roller heads pipe pipe System ukukhiqiza ipayipi ngentambo kakhonkolo, ukubumbana okuthuthukile nokubukeka okuhle kakhulu. Kungakhiqiza ipayipi ngobude obufanayo ngemininingwane eqondile yokuhlangana nekhwalithi ngaphakathi nangaphandle kokuqeda. Ukuqiniswa kwezinkinga ze-cage twist kuyasuswa, okuholela emandleni aphezulu womkhiqizo.
Kuqondile Radial Cindezela Ukhonkolo ipayipi Ukwenza umshini, Ungumshini wepayipi othandwa kakhulu ngobubanzi obungu-300-1200mm, ubude obungu-1-3m.
I-Automation ephakeme, futhi inamandla amakhulu, akukho slurry esimoshe ngesikhathi sokukhiqiza kulula ukusebenza, futhi bambalwa kakhulu abasebenzi, badinga kuphela ukwelashwa kwemvelo, kusheshe kususwe isikhunta ngokushesha. kwamukelwa ngokwengeziwe ngamakhasimende emhlabeni jikelele. Lonke uhlelo lwe-elekthronikhi nohlelo lwe-hydraulic zombili zamukela ukulawula kwedijithali, kuthuthukisa ukusebenza kokuphatha nokulawula ukunemba kwawo wonke umshini.
Kuzoba inketho engcono kakhulu yokwenza ububanzi obuncane Amapayipi e-RCC 300-1200mm.
imishini iyatholakala ngezinhlobo ezimbili:
• umshini wobubanzi 12 ”- 48” (300 mm - 1200 mm) ngobude obukhulu obungu-8 'noma 12' (2.5 m noma 3.5 m)
• umshini wobubanzi 12 ”- 60” (300 mm - 1500 mm) ngobude obungu-8 '(2.5 m) noma 12' (3.5 m
Obunye ubude bemishini buyatholakala uma ucelwa
Amathuluzi ayo aphendukezelayo, anama-roller-head, amathuluzi okuxinana ahlanganisa ukhonkolo futhi alawulwa yisistimu yokulawula esezingeni eliphakeme, ephezulu.
Ukukhiqizwa kwamapayipi kakhonkolo ahambisana nawo wonke amazinga omhlaba:
amapayipi kakhonkolo aqiniswe ngensimbi
i-steel-cylinder-core pipe (PCCP) efinyelela ku-6 m ubude
amamilimitha aqokiwe kusuka ku-DN 225 mm kuya ku-DN 1600 mm
ubude obufinyelela ku-3500 mm
izikhathi zokushintshwa okufushane ziqinisekisa ukusetshenziswa komshini omkhulu.
ayikho i-cage twist
ukuminyaniswa okulawulwa uhlelo.
inqubo ehlanganisiwe yokulawula inqubo.
umgodi womshini ongajulile.
izinketho ezingeziwe: i-crane ezenzakalelayo, uhlelo lokuhamba phansi, ukuhlolwa kwepayipi nokusingathwa kwepallet eyisisekelo.
Ama-motors kagesi alawulwa imvamisa kanye nomphumela wokudlulisa amagiya we-spur kuze kube yimanje ngejubane eliqondile kanye ne-torque ephezulu yemiphumela emihle kakhulu yokuhlangana. Vele ukonga amandla futhi kunomsindo omncane
Inani likakhonkolo libalwa kusengaphambili, ngohlelo lokulawulwa kwenqubo olwenziwe ngokucophelela futhi lunikezwa ngobuningi obuqondile namanani enkambisweni yokuhlangana. Umphumela uba yikhwalithi kakhonkolo engaguquki kusuka kusokhethi kuye ku-spigot. Iphinda ngokunembile nganoma yisiphi isikhathi.
Ithuluzi lokuxinana liyimpande yokuncipha. Ngenxa yokuhamba ngokujikeleza kwekhawunta, ikheji lokuqinisa lifakwe ngokuphelele ngukhonkolo futhi ukusonteka kwekheji kuyancishiswa. Vele zonke izingxenye zenzelwe ukugqoka isikhathi eside.
Amakhanda we-Bidirectional Roller Drive System
Uhlelo lwe-Bidirectional rollerhead drive lufaka phakathi amadrayivu ama-hydrostatic transmission amabili azimele wokufaka amandla i-rollerhead ne-longbottom. Isistimu le inezinto ezimbili eziyinhloko - iyunithi ye-crosshead drive neyunithi yamandla e-crosshead ehlukile. Iyunithi yamandla e-crosshead ibekwe ohlakeni lomshini ezingeni lokuhambisa ukuhlinzeka ngokudluliswa kwamandla okusebenzayo ku-crosshead nokufinyelela okulula kwensizakalo nokugcinwa.
Ukubamba i-Hopper ne-Conveyor
Amandla okubamba i-hopper asuselwa kusayizi womshini, kanti i-hopper ifaka amakhona ayindilinga ukuvimbela ukwakheka kwezinto ezibonakalayo. I-liner yokuzikhethela iyatholakala ukuthuthukisa ukugeleza kwezinto ezibonakalayo, ukwenza lula ukuhlanzwa nokwandisa impilo ye-hopper. Ukuhambisa kuqhutshwa ngogesi ngokulekelelwa kwamabhanti okuqinisa amabhande efektri futhi kufakwe amafutha ukuze kusetshenziswe ngaphandle kokugcinwa. Umhlangano wokuhambisa ugibele kuma-roller futhi ubekwe nge-hydraulic ngumphathi womshini ukuze uthole okuphakelayo kwezinto ezibonakalayo ku-rollerhead. Ibhande elihambayo elingenamthungo elinokuhlangana okubunjiwe livimbela ukuchitheka kwempahla.
I-turntable eyindilinga ifaka ama-roller wokuxhasa we-tapered ku-perimeter nomhlangano we-roller isikhungo sokugxilisa nokuxhasa. Itafula liyizingcezu ezimbili, kuya ngemodeli yomshini, futhi lifaka iziteshi zokwenza amapayipi ezinokusikwa okutholakala ngokunembile kwamapuleti aphakathi nendawo wokushintshela kokushintshayo kokunamathiselwe. I-turntable iqhutshwa kahle yimoto yamagesi kagesi. Ipuleti ledeski limboza indawo ephakathi kukaphethiloli naphansi kwesitshalo ukwenza lula ukuhlanzwa.
Langaphambilini Isikhwama se-Dumpster Skip
Olandelayo: China wholesale China Canvas Mens Cross Body Bag Corpse Izikhwama
Ukhonkolo Pipe Machine
Precast Ukhonkolo Pipe Machine
Rcc Kuqondile Ukhonkolo Pipe Machine
Kuqondile Ukhonkolo Pipe Machine
Cage Welding umshini
Izinqola Zokuhamba, Kuqondile Ukhonkolo Pipe Machine, U Bolts, Isakhiwo Bolts, I-Hex Bolts, Ama-Lag Bolts,